Izindaba - Ukulawulwa kwemishini yokunemba kwe-CNC lathe ekukhiqizeni
Ithonya le-CNC lathe machining ukunemba ngokuvamile kubangelwa izizathu ezimbalwa ezilandelayo, esinye isizathu semishini, eyesibili inkinga yamathuluzi, eyesithathu uhlelo, eyesine iphutha lokuma, namuhla ubuchwepheshe bemishini yeWally futhi uchaza kafushane lezi izici.
1. Ukunemba kwemishini kwe-CNC lathe okubangelwa imishini ngokuvamile kubangelwa yiphutha lohlelo lomshini uqobo kanye nephutha elibangelwe ukuphuma kwethuluzi lomshini. Enkambisweni yokusebenzisa ithuluzi lomshini, izingxenye ezingumgogodla ezifana nesikulufu sokuhola zigqokiwe, okuholela ekwandeni kwegebe, futhi kukhulu iphutha lephutha lomshini, elizothinta ukunemba kwemishini ye-CNC lathe;
2. Enkambisweni ye-NC lathe processing, kubaluleke kakhulu ukukhetha ithuluzi lokusika. Ithuluzi elingafanelekile lizoholela ekulayisheni okuphezulu kakhulu komshini nethuluzi lokugqoka ngokushesha okukhulu, okuzoholela ekunemba kwe-CNC lathe akukwazi ukuhlangabezana nezidingo zomkhiqizo;
3. Amapharamitha wokusika angenangqondo asethwe ngesikhathi sokuhlela futhi kungenye yezizathu zokuthi ukunemba kwemishini kwe-CNC lathe akunakuqinisekiswa. Amapharamitha wokusika we-feed kanye ne-revolution kufanele asethwe ngokuhlanganisa ithuluzi, izici ezibonakalayo kanye nemishini, ukuze kuqinisekiswe ukunemba kwemishini ye-CNC lathe;
4. Enkambisweni ye-NC lathe processing, iphutha le-datum lemikhiqizo lingenye yezizathu zokuthi ukunemba kwemishini kwe-CNC lathe akukwazi ukuhlangabezana nezidingo. Ngokuhlanganiswa kokujika nokugaya, izikhathi zokuqinisa zingancishiswa ngangokunokwenzeka, okunganciphisa ithonya lokucubungula kwesibili ekunemba kwemishini kwe-CNC lathe okubangelwa ukuguqulwa kwedatum.
Okuqukethwe okungenhla ubuchwepheshe bemishini ye-volley wonke umuntu ongabelana ngayo ngesihloko se-CNC lathe machining ngokunemba, unethemba lokunika abantu abasebenza ngemishini i-CNC.